Saxafigu dhexdhexaad ma ka noqon karaa qadiyada dalkiisa?
C/laahi Kolombo � tusaale ku dayasho mudan
Warbaahinta casriga ahi wa muraayada laga daawado dhacdooyinka nolosha.
Waana halka laga daalacdo waayaha bulsho kasta dareenkeeda, tabashadeeda iyo himilooyinkeeda nolosha. Waa madasha dood iyo dareen wadaaga wadareed.
dalalka lagu tilmaamo horu-marka ama hanaanka dimuquraadiga ahi ku xididaystay saxaafada waxa loo yaqaan laanta afraad ee laamaha sadexda ah ee caanka ah ee xukuumada (sharci dajinta, fulinat, garsorka). Shaqadeeduna waa inay ka jirto danta guud xad-gudubka, inay u noqoto danaha guud ee qaranka qareen iyo afhayeenn dhaliila wax kasta oo ku lid ah danta guud.
Iyada oo taasi jirto hadana waxa muqadas laga dhigaa xorriyada saxaafada iyo madax banaanideeda. Si ay u gudato waajibkeeda jawi xoriyad iyo cabudhin la�aan ah. Isla markaas waxa saaxfada haga danaha afkaarta ,dhaqanka ,anshaxa guud iyo hab nololeedka dalkaas, oo loo qabeeyo hab-xeereed qaabeeya shaqada saxaafada, si iyada lafteedu aanay u xad-gudbin.
Halkaas waxa inoogu cad in aanay ahayn macnaha xoriyada saxaafadu ama dhexdhexaad-nimadu dheh waxaad doonto.
Hadii xaalku sidaas ka duwanyahay maxaa loo arki waayay
dalka Mareenkanka oo amaanaya ama u ducaynayay Axmed Njaadka Iiraan ama shafeeska Finsuweela ama u garaabaya kooxa ay ku tilmamaan xag-jirka. Taasi ma dhici karto waayo waxa ka hor imanayasa aragtida iyo danaha guud ee haga siyaasada dalkaas. Mar walbana saxaafada dalka Mareekanku waxa ay ka qayb qaadataa hirgalinta siyaasada arimaha dibada ee dalkaas.
Waxaan xasuustaa xiligii duullanka uu ku qaadayay Mareekanku dalka Ciraaq, waxaa galbinayay ciidamada dalkaas boqolaal wariyayaal ah, oo xogta saxaafadeed ee baahinayaan ka qaadanayay af hayeenada iyo saraakiisha ciidamada dalkaas.
Sidoo kale duulaankii gardarada ahaa ee Itoobiya ku qabsatay caasimada dalkeena ee Mareekanku sida dadban uga qayb qaatay, saraakiisha siyaasada dibada ee Mareekanku waxay u gudbiyeen saxaafada wareegto ku saabasan qaabka ay wax uga qorayaan iyo in ay indhaha ka qarsadaan duullaankaas.
Waxa ka mid ah wareegtadan halkan ku qoranee loo gudbiyay wargayska New York Times nytimes on12-27007(the press should not be allowed to make this Ethiopia, or Ethiopia violating the territorial integrity of Somalia) read the copy the guidelines that was given ny times by American officials.
Ma doonayo inaan ku dheeraado tusaalayaasha iyo boqolaal dhacado oo la mid waayo waxaynu ka talaabsanaynaa ujeedada maqaalkan.
Hadaba hadaynu u soo noqono warbaahinta iyo saxaafada soomaalida gaar ahaan dagalada internetka iyo mawqifka ay ka taaganyihiin badankoodu duullaanka cadawgeenii taariikhiga ah ku qabsaday caasimadii dalkeena hooyo.
Maka aad isha mariso badiba saaxafada internetka ee soomaalida. Waxay wax u qoraan sidii oo ay ka hadlayaan dalka Jabbaan ama dagaallada Filibbiin.
Waxaad dareemaysaa in ay yihiin saxafiyiin ajanabi ah oo aan wax dareen wadaag al lahayn dhacdooyinka ay wax ka qorayaan.
Waxay khalad u fahmeen macnahah Dhex-dhexaadnimda saxaafada (dhulku idin la go!) xilli dalkii nacab haysto oo loo jabay guumaysiga madaw ee Xabashida, oo ku guulaystay inuu gaadho riyadiisii qarniyaasha jirtay ee ku salaysnayd dullaynta iyo aasidda qarannimada soomlaaiyeed; xilli masuuliin iyo madax isku sheeg soomaali ku abtirsadaa ku soo hoggaamiyeen dalka cadawgiisii taariikhiga ahaa; xilli dalka iyo dadku galay TAARIIKH MADAW oo aan hore u soo marin. Duruufaha sidaa u qallafsan ee dalk iyo dadku ku suganyahay waxaa ayaan darro iyo habaar ah in saxfiyiinta soomaaliyeed ku andacoodaan dhex-dhexaadnimo, oo ay gabaan kaalintoodii iyo waajibkii ka saarnaa dalkooda, iyo inay noqdaan codka iyo hubka xoraynta, iyo horseed bararujiya jidkana u iftiimiya dadwaynaha soomaaliyeed ee gumaysiga iska caabbiyaya.
Kumaan darin ragga aan canaantay Qalinada kiraysan ee mawqifkoodu gawskooda ku xidhanyahay, ee waxaan lah hadlayaa intaan ku tuhmayo damiir soomaalinimo iyo dareen qarannimo.
Cudar daarka kali ah ee aan u hayaa saxafiyiinta aan dhagarta u badheedhini waa damanaan. Waa soomaali daacad ah laakiin marin-habawsan .Waayo?
Dhallinyarada saxaafada ku dhex jira maahan rag leh shaqada ay hayaan khibradeedii, aqoonteedii iyo xeerarkeedii. Waa dhallinyaro kacaamay intii dalku burbursanaa, intooda badanina kama dheregsana taariikhda iyo qadiyada qarankooda, dalkooda iyo dadkoodaba. Danbigana iyagu ma laha waayo waxay kacaameen iyadoo aanay jirin adeegyadii guud ee qaranka ee aqoon�gudbiyayaasha ahaa ee dhaxalsiin lahaa taariikhda iyo taxanaha dalkooda. Sidaas awgeed wariyaasha kooxdan ka tirsan waxay u baahanyiin wacyi galin iyo wax u sheegid.
Waxa kale oo jira koox kale oo wariyayaal ah oo aan damanayn, balse iyagoo xiskooda qaba oo maankoodu ka fiyawyahay cudurrada dhimirka maskaxada badheedh qayaxan u galo godob qaran.
Waa wariyayaasha qalin-beelyaal ah. Waa ragg ay madax martay xanuunka Qabyaaladu. Waa nacamlayaal ka daba xadreeya inta soomalida kala dilkeeda ku hawlan. Waxay mikirifoon iyo qalin sumad qabiil leh la taagan yihiin fagaarayaasha warbaahinta.
Mar kasta oo aad booqato bogoga saxaafada internetka ee soomalida, waxaad arkaysaa 95% inay yihiin kuwo ku hadla af qabiil oo naxli iyo nacayb beeraya.
Dhacdo walba waxay wafajinayaan ama ku salaynayaan arargti beeleed.
Waxa ugu xanuun badan qadiyadihii qaranka soomaaliyeed marka loo sarifo hab qabiil ee lagu eego diiraad iyo maan qabiil. Taasi waxay keentay jaahwareer guud. Waxaanay abuurtay boqol fakir beelood iyo jifood oo is diidan oo is xifaalaynaya, oo ka tallaabsaday ciidana ku rogay dhamaan waxyaalihii muqadaska u ahaa qaranka soomaaliyeed.
Mar hadii xaalku sidaa yahay wax kastaa waa xalaal hadii beeshaada maalintaas la macaantahay.
Sidaa awgeed Itoobbiya waa saaxiibka kali ah ee shacabka soomaaliyeed.
Dagaalkii 77 khalad ayuu ahaa. Iska caabbinta cadawgu waa asal-raacnimo.
Soomaaliya waa inay ka dhacdaa kii roonow reerka u hadh ee yaan qabiilkaaga lagaga dheeraynin dhagarta iyo dilka. Soomaaliyi waxay ku hashiisay inaanay heshiinin. Soomaalidu isuma talin karto in loo taliyo mooyee. Qabiil waliba cadawga kali ah uu leeyahay waa qabiilka kale ee soomaaliyeed, saaxibka kali ah ee uu leeyahayna waa dawlada Itoobiya iyo �walaalka wayn� ee Melez zinawi!!!.
Halka saxaafada soomaalidu afkaaraha kor ku xusan faafinayso, dhanka kale dalka ina la dariska ee aynu colka ahayn ilaa waligeen saxafadiisa hadaad isha mariso subaxdii waxaad arkaysaa inay tahay saxaafad ku salaysan inay u adeegto danaha dalka Itoobiya iyo damacyadiisa dhul balaadhasiga ah ee soo jireenka ah.
Tusaale ahaan maalintii ciidamada cadawga Itoobiya qabsadeen caasimadeena Muqdisho wargeyska ADIS TRIBUNE waxa uu ku qoray boggiisa hore cinwaankan (The mission Accomblished) oo macnaheedu yahay hawlgalkii waa lagu guulaystay.
Hawlgalka lagu guulaystay waa riyadii soo jireenka ahayd ee madaxda Itoobbiya ee ahayd inay maalin uun Soomaaliya gacanta ku wada dhigaan oo guumaystaan.
Saxaafada itoobiya ma soo bandhigto 70 qoomiyadood ee Itoobbiya ku nool ee is guumaysta ee kal afka, dhaqanka, diinta iyo damaca duwan. Waxaanay ka hadlaan kali ah qaranimada iyo midnimda Itoobbiya.
Haddaba wariyayaal ku sheegga soomaaliyeed ma waxa ay garan waayeen inta Adis Tribune garatay? Mise waxay ku hawlanyihiin oo ka qayb qaadanayaan fulinta ajendaha Itoobbiya?
Sow qaranjab maaha in 3% wax ka yar saxaafada dagalada soomaalida wax u qoraan hab soomaalinimo ku dheehantahay? Sow ayaan darro maaha xasuuqa qorshaysan, taangiyada iyo diyaaradaha lagu garaacayo maatada, qiiqa iyo holaca madafiicda ee aad mooddo qiiqii ceelashii shidaalka ee Ciraaq, maydka maatada ee wadhan waddooyinka Muqdisho ee la kala aasi kari waayaay, in ay fara ku tiris noqdaan saxafiyiinta iyo qalin-maalka soomaaliyeed ee u taagan difaaca dadkooda la gumaadayo?
Akhriste, waxaan ku ku dheeraaday qaawinta wajiga fooshaxa xun ee warbaahinta soomaalida, waxaase hubaal ah inta nolol jirto rajada Ilaahay lagama quusto. Haddaba waxa is waydiin leh, ma jiraan wariyayaal soomaaliyeed oo wali damiir noooli ku jiro?
C/laahi-Kolombo - tusaalaha damiirka nool
Waa naxariista Ilaahay in casri kasta oo xumaantu baahdo, dareenka xaqa ku taaganina agoon noqdo, inay jiraan xiddigo ifiya oo mudduci ku noqda mugdiga dulmiga gacanta sare leh.
Haddaba maadaama aan ku dheeraaday soo gudbinta falaadka xun ee warbaahinta soomaalida, waxaan halkan ku soo gudbinayaa tusaale san oo qof kasta oo soomaali ah qalbigiisa yididiilo iyo farxad ku abuurayasa. Waa wariye soomaaliyeed oo muujiyay mawqif karaamo, soomaalinimo, daacadnimo iyo madax �bannaani fikireed ku dheehantay.
Halyaygaasi waa C/Laahi Nuur �Kolombo� oo ku nool carriga Mareekanka, waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada iyo indheergaratada soomaaliyeed ee u arka arrimaha iyo dhacdooyinku sida ay yihiin, isla markaasna ka badbaaday in xumadda qabiilka iyo dhuuni-raacnimadu ka naafayso damiirka iyo dareenka wanaagsan, libaynta iyo garab istaaga qadiyadda dadkiisa iyo dalkiisa.
C/laahi wuxuu ka mid ahaa wariyaayaashii caanka ahaa ee Raadiyow Muqdisho, gaar ahaanna daaddihin jiray barnaamijkii �Faaqidaadda ciyaaraha� ee godli jiray dhegaha dhagaystaayasha ciyaaraaraha xiiseeya.
Haddaba akhristow waxa dhadcay dhacdadan aan kaaga sheekayn doono oo ah midda igu kalliftay qorista maqaalkan.
C/laahi waxa uu hawl-wadeen ka ahaa Idaacada layska arko ee la yiraa Somali Internet TV ee fadhigeedu yahay magaalada Minyaabolis.
Ka dib markii Cadawga amxaaradu gacanta ku dhigay caasimadii dalka, ee gumaadka iyo baro-kicinta ka simay rayidkii iyo maatadii, ayaa Cabdillaahi ka adkaysan waayay waxa meesha ka dhacaya iyo mashaqada dalka ka taagan, waxaanu muujiyay mawqifkiisa uu kula xanuunsanyo qarankiisa iyo dadkiisa.
Waxa uu Canbaareeyay gumaysiga madow iyo kuwa soo hoggaamiyayba.
Dareenkaas uu muujiyay waxa ka biyo diiday oo damcay inay xayiraan baahinta aragtidiisa wadaniga ah, milkiilayaashii iyo saami-laydii soomaaliyeed ee tiifiiga maalgashaday, raggaas oo iyagu dhanka kale ahaa si qayaxana ugu xaglinayay dawlad kuu sheegta xasuuqa shacabka loogu gabbado.
Waxaan hadaba halkan idiinku soo gudbinayaa hadalkii Cabdillaahi arrintaas kaga jawaab celiyay.
�Inkastoo aan ahay Suxufi muddo dheer ku soo dhex jiray hawsha saxaafada, aadna xog-ogaal ugu ahaa isbadaladii dalka ka dhacay, haddana damiirkaygu wuu i siin waayay in aan dhex-dhexaad ka noqdo dalkaygii oo cadaw haysto. Waxaan ku boorrinya aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan dacallada dunida inaysan indhaha ka daawan xaalada dalkooda, kana qaataan doorka kaga aadan. Dabadhilifyada dalkooda cadawga ku soo hogaamiyay waxay noqon kuwo taariikhda ka gala baal madaw.�
Ka dib markii Cabdillaahi mawqifkiisa shaaca uga qaaday, kuna faafiyay shabakada internetka, ayaa waxa cirka isku shareeray khilaafkii isaga iyo madaxdiisa. Intaas ka dib waxa uu sii geesinnimo leh uga fara xashay xilkii u ka hayay Somali �TV internet. Waana kan Cabdillaahi isagoo mar kale arrintaas tibaaxaya:
�Hawshii Somali-TV-Internet waxaan uga tagay markii raggii ila shaqaynay ay isku dayeen inay hor istaagaan fikirka aan kula xanuunsanayay waxa dalkii ka dhacaya.�
Sidaas ayuu Kolombo kaga tagay shaqadiisii isagoo sharaf iyo maamuus wadaninimo xambaarsan. Waxaana hubaal ah inuu taariikhda ka gali doono kaalin sharafeed jiilalka danbe ku xasuustaan.
Diinaari iyo Kolombo waa walaalo!
Akhristow, waxaan kuu hayaa arrin kaa yaabisa oo madaxa la ruxi doontid. Waayo? Waxa aynu nahay ummad aan inta badan qofku lahayn aragti madax-banaan. Qofka soomaaliga ahi waxa aragatida la wadaagta beeshiisa ama reerka uu ka dhashay. Gar iyo gardarrabana waa inuu taageeraa haddii kali waxa shaki galaya aqoonsigiisa beeleed.
Ma ogtahay halyayga aan tusaalaha u soo qaatay ee kolombo iney walaalo run ah oo uur ka soo wada baxay yihiin ninka lagu magacaabo C/raxmaan Diinaari ee ah afhayeenka dawlad ku sheegta cadawgu ku gabraarto?
Akhristow, adiga ayaan kuu daayay faallada arintaas.
Waxaan jecelahay inaan ku soo gunaanado maqaalkan ila taraaray baaq aan u jeedinayo warbaahinta soomaaliyeed gaar ahaan dagalada internetka.
walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad ku dayataan walaalkiin Kolombo, oo aad mawqifka iyo qalinkaba ugu gargaartaan dalkiina guumaysigu haysto. Ha noqdo qalinkiinu waran cadawga weerara. Hhaatuf yididiilo iyo naruuro wanaagsan u noqda dadwaynaha, iyo xaq u dirirka guumaysiga inaga dhicinaya kuu diirsadaan. Qalinkiinu yuu noqon mid u hiiliya nacabka, oo qariya ceebaha iyo hargdaamada guumaysiga Xabashida.
Walaalayaal, afkiinna iyo qalinkiinnu waa hub iyo saanade ka fiirsada dhanka aad la garab istaagaysaan. In afku hub yahay casri walba waa kii Sayid Maxamed lahaa:
Waa laqan madaafiic ah iyo danab lifaaqoone
Waa liifad duushiyo rasaas leeb ah oo dhiciye